का खाता को कसरी खोल्ने हेरौं एक व्यक्ति उद्यमी को बैंक मा। यो प्रक्रिया मात्र पछि ठाउँ लिन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ आईपी को राज्य दर्ता। एकै समयमा एक व्यापारीले लागि सबैभन्दा सुखद कुरा उहाँले विभिन्न मुद्राहरुमा रूसी कानून मा यस सन्दर्भमा कुनै प्रतिबन्ध गर्छ छन् छैन धेरै खाता छन् अधिकार छ भन्ने छ।
सामान्य मा, हामी धेरै चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ प्रक्रिया रुचि राख्नुहुन्छ।
स्टेज №1। उपयुक्त बैंकिङ संस्थाले छनौट। एक व्यापार मालिक कहाँ सोच्न सुरु गर्दा , बैंक खाता खोल्न त्यसपछि सबै को पहिलो उहाँले प्रत्ययनीय र आर्थिक स्थिर को संगठन रुचि छ। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड - मर्मतका को लागत। शहर विभिन्न बैंकहरू कम्तिमा दुई प्रतिनिधित्व छ भने, तपाईं नै सेवाहरूको लागत तिनीहरूले विभिन्न हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, विशेष महत्व वित्तीय संस्थाहरू बजार मा चिरपरिचित छ। आखिर, के ज्ञात र ठूलो छ, अधिक महंगा यो सेवा हुनेछ। साथै, कृपया याद गर्नुहोस् कि निम्न अंक:
• शाखा सञ्जालको विकास को स्तर - आफ्नो गतिविधिहरु को पाठ्यक्रम मा बाहिर अन्य क्षेत्रहरु मा स्थित साझेदार संग गणना बोक्न छ कि घटनाको महत्त्वपूर्ण छ;
व्यापार साझेदार caters जो • बैंक, - एउटै वित्तीय संस्थाले को सेवाहरू प्रयोग उच्च गणना गति र विभिन्न सञ्चालनका लागि आयोग को न्यूनतम रकम प्रदान गर्दछ।
स्थानको लागि, यो कम से कम महत्त्वपूर्ण मापदण्ड छ। "ग्राहक-बैंक" प्रणाली विकास जस्ता यो एक शाखा (शाखा) को भ्रमण बिना सम्भव बाहिर बैंकिङ कारोबार बोक्न बनाउँछ। यस्तो प्रणाली रोचक र प्रयोगको वित्तीय संस्थाहरू सेवा व्यक्तिगत अभियान को मामला मा भन्दा सस्ता छ भन्ने तथ्यलाई।
स्टेज №2 - बैंक खातामा व्यक्तिगत उद्यमी को एक तत्काल खोल्ने। द्वारा सपा मा यस मामला आवश्यक गर्न प्रदान केही कागजात। यी तथ्याङ्कहरू (कोड) देखि अक्षर, (कर अख्तियार द्वारा जारी) दर्ता को प्रमाणपत्र, राज्य दर्ता प्रमाणपत्र समावेश गर्नुहोस्। मूल हुनुपर्छ सेवा र सूचीकृत जमानत को प्रतिहरू।
साथै, खाता खोल्ने व्यक्तिगत उद्यमी डिजाइन हस्ताक्षर कार्ड पनि समावेश छ। अन्य सबै कागजात बैंकिङ संस्थाले निःशुल्क प्रदान गर्नेछ। हाल, प्रामाणिकता को प्रमाणीकरण एक नोटरी वा बैंक प्रबन्धकको उपस्थितिमा त बाहिर गर्न सकिन्छ। दोस्रो, को पाठ्यक्रम, धेरै ग्राहक लागि सुविधाजनक। यसबाहेक, दल सेवा सम्झौता द्वारा हस्ताक्षर र मुख्य लक्ष्य हासिल छ भनेर हामी मान्छु गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, व्यापारीले व्यक्तिगत उद्यमी बैंक खाता खोल्ने हो कि घटनाको सूचना कर inspectorate, सामाजिक कोष सजग हुनुपर्छ। बीमा र पेन्सन कोष। यो, प्रसंगवश, तेस्रो चरण। उपस्थित सबै को संगठनमा व्यक्ति छ आवश्यकता छैन, किनभने तपाईं प्रयोग मेल सेवा। कर र अन्य सेवाहरूको कि सूचना वैकल्पिक छ लाग्छ छैन। यसको विपरीत: हरेक व्यापारी ठ्याक्कै7दिन त्यसो गर्न दिइएको छ कि व्यवस्था स्पष्ट stipulates।
यो व्यक्तिगत उद्यमी बैंक खाता खोल्ने FTS लागि unnoticed जाने भनेर विश्वास गर्न अनुभवहीन हुनेछ। वित्तीय संस्थाहरू (बैंकहरू) स्वतन्त्र अन्तिम सबै आवश्यक जानकारी प्रसारित भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले व्यवस्था स्वभावका हप्ता भित्र राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
बैंक "बायाँ बैंक": समीक्षा
उच्च प्रतिशतको मा अल्पकालीन निक्षेप। जहाँ सबै भन्दा अनुकूल अवस्था?
कार्ड नम्बर एक प्लास्टिक कार्ड छ जो?
संगीत शब्द को अवधारणा र आवेदन: को "पाश" के छ
"Amlodipine": प्रयोगको लागि निर्देशन। हामी एनजाइना संग संघर्ष गर्दै छन्
100 दरवाजे बेलगाम: गाइड
Inhaler "स्टार" नाक लागि: एक निर्देशन प्रतिक्रियाहरू
पोर्क करङहरु सूप। केही सरल व्यञ्जनहरु
जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु के हो? जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु जहाँ खन्याउन? निर्देशन
अभिनेता विक्टर Zaporizhia: जीवनी, Filmography
तपाईं कसरी प्रेम जसलाई आफ्नो पूर्व-पत्नी भूल? व्यावहारिक सुझाव र चाल
आफ्नै हातले polypropylene पाइप को ग्रीनहाउस। को ग्रीनहाउस polypropylene ट्यूब को फ्रेम